Dharkeena 10ka ah ee jecel | Ragga Stylish
Dayrta ayaa garaacda albaabadeena waana waqtigii la heli lahaa jaakad wanaagsan xilliga. Waxaa jira noocyo iyo fasalo badan oo ku habboon qaabkeena maalinlaha ah iyo xitaa dabeecadeena.
Maaddaama aysan ahayn hawl fudud, waxaan soo uruurineynaa kuwa ugu cadcad xilligan:
Dharkayaga 10 ee loogu jecel yahay deyrtaan:
Parkas: Waxay ku habboon yihiin muuqaalka magaalada laakiin isla markaa waxay la aadi karaan dharkaaga rasmiga ah. Iyagu waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu diirran ee u adkeysan kara heerkulka hoose iyo cimilada qoyan. Iyada oo lagu qurxinayo millatariga, daboolka dhogorta ayaa noqday mid qasab ah inuu yeesho dhowr xilli.
Jaakadaha xabaasha- Koodhkan astaanta ah waxaa loo yaqaanaa geesaheeda iyo badhamada qaabaysan. In kasta oo ay ku xasuusinayso sannadihii carruurnimadaada, haddana waxaan dib uga soo kabannay dhowr sano. Waa nooc aan waligiis dhiman oo ku habboon nooc kasta oo muuqaal ah.
Dhar jaakad dhogor ahQeexitaanka xarrago waa jaakad dhogorta-dhaadheer ee caadiga ah, badhannada qarsoon iyo kuwa furan ee furan. Kuma dhici kartid inaad ku sharraxdo shaygan khasabka ah ee dharkaaga.
Jaakadaha: oo dhererkeedu aad uga gaaban yahay dharka dhogorta dhogorta ah, waxaan ka hadlaynaa jaakadaha maraakiibta quruxda badan. In kasta oo buluug buluug ah uu yahay midabka qasabka ah ee dharkan, sidoo kale midabada sida burgundy waxay ku dari doontaa taabashada asalka noloshaada maalin laha ah.
Guntinta: jaakadaha xashiishka waa dharka ugu fiican maalmaha roobka iyo xilli-xilliyeedka. Maalgelinta koodhka roobka had iyo jeer waa tallaabo xigmad leh.
waa kuwee qaabka aad ugu jeceshahay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Isbeddellada » Dharkeena 10ka ah ee ugu jecel
Noocee ayaa ah jaakadaha?